माओवादीद्धारा यात्रुवाहक बसमा आगजनी – manoranjansansar.com | A Entertainment News portal for all
माओवादीद्धारा यात्रुवाहक बसमा आगजनी
नेकपा-माओवादीका कार्यकर्ताको बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै यात्रुवाहक बसमा आगजनी गरेका छन । काठमाडौबाट मेलम्ची जाँदै गरेको बा. २ ख ५६७२ नम्बरको यात्रु बाहक बस धुलीखेलमा राेकेर आगजनी गरेका हुन् । बसमा सवार यात्रु सुरक्षित छन । बसमा लगेको आगो नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ । त्यसैगरी एक पत्रकार माथि बन्दकर्ताले आक्रमण गरेका छन । बन्दको अवज्ञा गरेर मोटरसाइकल चलाएको भन्दै पत्रकार देवराज केसीमाथि उनीहरुले बनेपामा आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणबाट केसीको आँखा नजिकै चोट लगेको छ ।
आगजनी गरिएको बस ।
पत्रकार माथि बन्दकर्ताले आक्रमण गरे लग्त्तै स्थानीय बासिन्दा बन्दको प्रतिकारमा उत्रिएका थिए । नेकपा-माओवादीका कार्यकर्ताहरुले स्थानीयको प्रतिकारको प्रतिरोध गर्न हातमा रड बोकेर सडकमा उत्रिएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई लखेटेको थियो ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक आश्विन कुमार गिरीका अनुसार रड बोक्ने आधा दर्जन भन्दा बढी बन्दकर्तालाई पक्राउ गरिएको छ ।
बन्दको प्रभावले जनजिवन पूर्ण रुपमा प्रभावित बनेको छ । भाडाका सवारी साधनहरु चलेका छैनन् । बनेपामा केही पसलहरु भने खुुलेका छन ।
प्रहरीले शान्तिसुरक्षा खलल पार्ने काम गरेको आरोपमा नेकपा-माओवादीका केन्द्रिय सदस्य चुडामणी गौतम, जिल्ला कमिटी सहसचिव गोपाल घिमिरे, क्षेत्र.न. ४ का इञ्र्चाज गिता रसाइली, अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका जिल्ला उपाध्यक्ष सागर मिजार, राष्ट्रिय युवा जनस्वयम् सेवक नेपालका जिल्ला इञ्र्चाज खड्ग बहादुर श्रेष्ठ, नेता सागर मैनाली, लगायतका नेताहरुलाई पक्राउ गरेको छ ।
दिल्ली सामूहिक बलात्कारका चार दोषीलाई फासीको सजाय
विपी राजमार्गमा जीप दुर्घटना हुँदा ३ को मृत्यु, ८ घाइते